‘विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ’:: Artha Dabali
कन्ट्री म्यानेजर, अभिषेक श्रेष्ठ आईडीपी नेपाल
आईडीपी (इन्टरनेशनल एजुकेशन स्पेसलिष्ट) नेपाल कस्तो प्रकारको संस्था हो ?
शैक्षिक परामर्श सेवामा विश्वस्तरिय र विश्सनिय सेवा प्रवाह गरिरहेको संस्था हो जसको ३० देशमा १सय ५० बढि ब्रान्चेचहरु रहेका छन् ।
जसले विश्वभरमा आफ्नो करिअर विकास गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई सल्लाह सुझाव सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आईडीपी अष्ट्रेलियन कम्पनी हो । जुन अष्ट्रेलियामा सूचिकृत छ । यसले गर्दा यो संस्था बढी विश्वसनीय छ । त्यस्तै विश्वका ७ सयभन्दा बढी विश्वविद्यालय, कलेज तथा एकेडेमिक संस्थाहरुसँग हाम्रो प्रतिनिधित्व छ । यसकारण विदेश गएर उच्च शिक्षा लिन इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई हामीले धेरै विकल्प दिन सक्छौँ । त्यस्तै नेपालमा पनि अष्ट्रेलिया जान चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि एउटा राम्रो प्लेटफार्म हो ।
आईडीपीले सञ्चालन ‘बृहत अष्ट्रेलिया फेयर’ कस्तो प्रकारको हो ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका विभिन्न शैक्षिक मेला तथा फेयरहरू भन्दा एकदमै भिन्न र उत्कृष्ट मध्येमाा पर्दछ । होटल र्याडिसनमा शुक्रबार संचालित उक्त फेयर मेला उत्कृष्ट शिक्षा आर्जन गर्न अष्ट्रेलिया जान चाहेका विद्यार्थीकालागि विशेष मौका पनि हो ।
सायदै अष्ट्रेलियाबाट यति धेरै कलेज तथा युनिभसिर्टीले आफ्नो सहभागिता जनाएका छैनन् होला । आइडिपीले गत शुक्रबार गरेको फेयरमा ३७ ओटा कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जहाँ एकै छानामुनी यति धेरै शैक्षिक संस्थासँग प्रत्यक्ष विद्यार्थीले कुरा राख्न सक्छन् । यो मेलामा करिब २ हजार बढि विद्यार्थी सहभागी भए ।
तपाईहरुले ५ हजार अष्ट्रेलियन डलरको छात्रबृत्ति घोषणा पनि गर्नु भयो यो के का लागि हो ?
आईडीपीले नेपालमा संस्था सञ्चालन गर्ने समयमा ५ हजार अष्ट्रेलियन डलर दिने घोषणा गरेका थियौँ । जसमा सयौँको संख्यामा विद्यार्थीहरुले आवेदन पनि गरे । त्यसमध्ये ८ उत्कृष्ट आवेदनहरु छनौटमा परे । अध्ययनका लागि उत्कृष्ट जेहेन्दार विद्यार्थीले थप आर्थिक प्याकेजले हौषला ऊर्जा प्राप्त गरुन भन्ने संस्थाको उद्धेश्य हो ।
उनीहरुको भविष्य निर्माणमा छात्रबृत्तिले योगदान दिन सकोस भन्ने अभिप्रायले प्रदान गरिएको हो ।
विश्वसनिय व्यवस्था अनुसार विशेष मापदण्डका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरियो । उक्त समूहले विद्यार्थीको शैक्षिक पृष्ठभूमि, पहिले कति नम्बर ल्याएको थियो, आयल्सको स्कोर कति छ ? जस्ता मापदण्ड पनि बनाएको थियो । छनौट भएका अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर वर्डसन्द्वारा उनीहरुका अभिभावकलाई यहाँ सर्टिफिकेटसहित उक्त छात्रबृत्ति हस्तान्तरण गरेका छौँ । अझै पनि हामीसँग दुईओटा ‘स्कलरसिप’ खुल्ला छ । यस विषयमा बुझ्नको लागि विद्यार्थीहरुले हाम्रो हात्तीसारस्थित कार्यालयमा नै आउन सक्छन् ।
ग्लोबल सिइओ र म्यानेजिङ डाइरेक्टर नेपाल आउनु भएको समय हामीले १० जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थियौँ ।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका विशेषत कस्तो विषय छनोट गरेको पाइएको छ ?
नेपालबाट सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, आइटी जस्ता विषय अध्ययनका लागि आकर्षित देखिन्छन् । तर, खुशीको कुरा के छ भने नेपाली विद्यार्थीहरु अन्य अलि फरक विषयतर्फ पनि आकर्षित छन् । केहि समयअघि मात्रै एकजना विद्यार्थी ‘आर्टस्’ पढ्नका लागि जानुभयो । उहाँको उद्देश्य भनेको राम्रो थियटर आर्टिस्ट बन्ने रहेछ । त्यस्तै, एग्रिकल्चर साइन्स वा यस्तै एकदमै फरक विषयमा पनि विद्यार्थीको चासो बढेको देखिन्छ ।
अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि किन आवश्यक छ ?
मेरो अनुभवमा उच्च शिक्षाका लागि वाहिरिएका विद्यार्थीहरुले धेरै राम्रो गरिरहनु भइरहेको छ, अपवाद वाहेक । विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् ।
एउटा राम्रो करिअर डेभलप हुन्छ । आर्थिक उपार्जनदेखि जीवन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । विश्व संस्कृति टेक्नोलोजी पनि सिक्नेछन् ।
अन्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
आइडीपीले सञ्चालन गरेको यस्तो प्रकारको फेयरमा भएर एकै छानामुनी प्रत्यक्ष कलेज तथा युनिभर्सिटीका व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्न सकिन्छ । जसले विद्यार्थीहरुलाई कन्फिडेन्स बढ्दछ । यसैले कसैले नछुटाउन आग्रह गर्दछु । यदि छुटमा हाम्रो सम्पर्क कार्यलय हाात्तीसारमा पनि आएर एक्पर्ट काउन्सिलरहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । आउनुस बुझ्नुस् आफ्नो करिअरबोर आजै सोच्नुस् भन्न चाहान्छु ।